Ukumaketha Kentethe | Martech Zone
ULwesibili, May 12, 2009 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
QAPHELA: The imiphumela ikhona kulo mkhankaso! 4,911% ukwanda kwezimoto kusukela ngo-Ephreli kuya kuMeyi; Ukubukwa kwamavidiyo angama-144,843 ngamazwana ayi-162; Ama-tweets ayi-1,500; Ama-blog angu-120 ngenyanga eyodwa; AmaTweets avela kuGuy Kawasaki, Kevin Rose, noJason Calacanis; Kukhulunywa ngama-TV kazwelonke ayi-7.
Ngobusuku ngifikile ekhaya ngathola i-FedEx ebhekiswe kubhulogi yami isuka I-Grasshopper. Ngokumangazayo, ngavula iphakethe futhi ngathola empeleni iphakethe lezintethe zangempelalethi ezimboziwe - manje lowo umkhankaso wokumaketha!
Funda ukuphrinta okuhle! Iphakheji bese libhekisa umlayezo kusuka Intethe kubosomabhizinisi:
Intethe kungenzeka ingabi yilokho okucabangayo! Empeleni uhlelo oludidiyelwe lwefoni (i-pbx ebonakalayo) yenkampani yakho efaka izinombolo zamahhala, ukudlulisela amakhono ekhaya, iselula, ihhovisi… ngisho ne-voicemail online ukuze ithumele amakhono e-imeyili. Izindleko zihluka ngokuya ngephakheji ongathanda - kepha ziqala ku- $ 9.95 ngenyanga futhi zifinyelela ku- $ 199 ngenyanga.
Ngingumuntu othanda umkhankaso wokumaketha onamathela esixukwini futhi lona ungomunye wabo! Ngingathanda ukufunda okwengeziwe ngendlela i-Grasshopper enqume ngayo ukuthi osomabhizinisi babeyizithameli eziyinhloko kulo mkhankaso. Ngibheke phambili futhi ekutholeni ukuthi umkhankaso usebenza kanjani. Uma kungaholeli kwimali engenayo eqondile, nakanjani izoletha ukuqwashisa ku-Grasshopper!
Kuzothakazelisa ukubona ukuthi le nsizakalo izoncintisana futhi ibambe kanjani I-Google Voice lapho iya bukhoma. Kubukeka sengathi iGrasshopper inokusebenza okunamandla, kepha amanani entengo namamitha angahle abe yisithiyo kwamanye amabhizinisi amancane.
Ngokuqondene nezintethe ezimboziwe ngoshokoledi, ngizamile eyodwa kanjalo nomngani womndeni. Yayinambitheka njengoshokoledi ... ngokuqhekeka okuncane. Indodana yami nendodakazi yami benqabile ukuzama eyodwa.
Tags: imeyiliI-InstantCustomerJabberJiraJotFormKanbanToolAmalebhu WokuqalisaMthembeniNgakwesobunxeleOkungaphansiKubalwaLighthouseUmhleli We-LiquidI-LockitronIbhokisi leposi
Ubani Osebenzisa i-Twitter?
Ukumaketha Kokuhola NgePowerpoint?
May 13, 2009 ku-10: 26 AM
Siyabonga ngokubhala okuhle. Ngiyajabula ukuthi uthole izintethe futhi ngiyethemba ukuthi uzame enye.
Ngingathanda ukuveza izinto ezimbili osuzishilo. Okokuqala, mayelana nokuba bukhoma. Sikhonze osomabhizinisi abangaphezu kwama-70,000 kuze kube manje (http://grasshopper.com/about) futhi uqhubeke nokwenza ngcono insizakalo ngokuya ngempendulo. Okwesibili, mayelana neGoogle Voice. Njengesevisi yabathengi, i-Google Voice inhle. Lapho iGrasshopper yehluka khona yakhelwe njengethuluzi lebhizinisi. Izandiso zabasebenzi neminyango, amashejuli wokudlulisa amakholi, ingosi eqinile online, ethembekile, kanye nokusekelwa okubukhoma okungu-24/7. Empeleni, isandiso sakho se-Grasshopper singadlulisela kwinombolo yakho yocingo ye-Google Voice ngangokunokwenzeka ku-Blackberry yakho, ifoni yakho yasekhaya, njll.
Uma ungathanda ukuhlola le nsiza, ngicela ungazise.
May 13, 2009 ku-9: 54 PM
Ngiyabonga kakhulu ngokuphendula! Ngiyabona ngokuphelele ukuthi kukhona umehluko omkhulu phakathi kwezicelo zebhizinisi nezabathengi - iphuzu lakho lithathwe kahle. Siyakuhalalisela ngokukhula nempumelelo yakho. Anginaso isiqiniseko sokuthi ngizosinaka isicelo sakho ngokwanele… kepha uma ngisebenze ezinhlotsheni eziningi, nakanjani ngizoba neGrasshopper ohlwini lwami lwezinhlelo zokusebenza engizozama ngazo.